Izindaba - Yini Amafomu Okulungiswa Womoya Opholile
Yiziphi Amafomu Okulungiswa Womoya Opholile
Ngokuya ngezimo zokusebenza, i-cooler yomoya ingahlukaniswa ngemithethonqubo yesandla kanye nomthethonqubo ozenzakalelayo.
1) Imodi yokulungisa imanuwali ukulungisa amapharamitha wokusebenza we-fan noma i-shutter ngokusebenza ngesandla, njengokuvula nokuvala ifeni noma ukushintsha i-angle blade fan, isivinini kanye ne-shutter angle yokuvula ukushintsha ivolumu yomoya wabalandeli. Isetshenziswa kabanzi i-angle fan fan (eyaziwa nangokuthi yi-manual angle fan) ne-shutter yesandla. Ukulungiswa kwesandla kunezinzuzo zemishini elula nezindleko zokukhiqiza eziphansi. Kepha ikhwalithi yomthethonqubo ayifanele, ayikwazi ukulungiswa ngesikhathi, engahambisani nokuqina kwekhwalithi yomkhiqizo (ophakathi). Ngasikhathi sinye, akuhambisani nokonga amandla omoya. Izimo zokusebenza zimbi kakhulu, impeller ikhishwa yinyanda yeshubhu, izinga lokushisa liphakeme kakhulu, indawo yokusebenza incane, nesikhathi sokuvala side kakhulu.
(2) Indlela yokulungisa ivolumu yomoya yefeni ukuguqula ivolumu yomoya yefeni ngokuzenzakalela. Okusetshenziswa kakhulu abalandeli bokulungisa i-angle okuzenzakalelayo nama-shutter okuzenzakalelayo. Amapharamitha wokusebenza we-fan noma i-shutter angalungiswa ngawodwana noma ngokuhlangana. Akunandaba ukuthi iyiphi imodi yokulungisa, ingaxhunywa ohlelweni lokulawula ithuluzi lokuzenzekelayo. Indlela yokulungisa okuzenzakalelayo inganciphisa umthwalo wokulamula, igcine ukuzinza kokusebenza, ithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo, ithuthukise izimo zabasebenzi futhi yehlise ukusetshenziswa kwamandla.
I-cooler yomoya iyinhlobo yemishini esebenzisa umoya omile njengendawo yokupholisa ukupholisa noma ukuqinisa uketshezi lokushisa okuphezulu kwepayipi. Inezinzuzo zokungabikho komthombo wamanzi, elungele ukushisa okuphezulu nezimo zenqubo yokucindezela okukhulu, impilo ende yokusebenza kanye nezindleko zokusebenza eziphansi. Ngokushoda kwemithombo yamanzi namandla nokwenziwa ngcono kokuqwashisa ngokuvikelwa kwemvelo, umoya opholile onokonga amanzi, ukonga amandla nokungcoliswa komoya kusetshenziswe kabanzi, Uhlobo nokusetshenziswa kohlobo lwepuleti lomoya opholile